သက်မွန်မြင့် | Myanmar Model
သက်မွန်မြင့် Like this:Like Loading... 79 comments so far ngaihnu
May 7, 2008	aesdfwreygtrwa
May 8, 2008	ghja gflideur
May 10, 2008	gj;lajgiow[mnlf[wef[iwerwetreytrujhfgj
May 13, 2008	ytuyiuyiuoui
May 13, 2008	m,lkjlkj;
June 8, 2008	i like it
December 3, 2008	သက်မွန် … ဆက်ကြိုးစားနော် … အားပေးနေတယ်..
January 7, 2009	ညီမလေး သက်မွန်…
၀ါသနာ နဲ့ ဘ၀ ပေါင်းစပ် ပြီး ကြိုးနေ တဲ့ ကိုညီမလေး ထာဝရအောင်မြင်ပါစေနော်……..
January 28, 2009	အောင်မြင်ပါစေဗျာ …..
January 29, 2009	ဒီထက်ပကပိုပြီတော့အောင်မြင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
February 18, 2009	မသက်မွန်ရဲ့ ထာဝရပရိတ်သတ်ပါ။ ကြိုးစားထား။
March 3, 2009	သက်မွန်မြင့်ကို ကျွန်တော် တအားချစ်တာပဲဗျာ။ပရိသတ်တစ်ယောက်ထက် ညီမလေးတစ်ယောက်လို ။ညီမလေးကလဲ တအားချစ်ရတဲ့ ညီမလေးဖြစ်ပြီး အဝေးမှာ ခွဲထားခဲ့ရတဲ့ ညီမလေးလိုပါ။ရုပ်ပုံလေးတွေတွေ့တိုင်း ရင်ထဲမှာ လွမ်းသလို ဆွေးသလို တမြေ့မြေ့နဲ့။ကျွန်တော် ဒီလို အမြဲရေးပို့လို့ရမလား။သက်မွန်မြင့်ကရော ဒီလို မေးတဲ့သူဆီ တကူးတက စာပြန်ပေးသလား သိချင်ပါတယ်။
March 12, 2009	iyou
မမကို ကျွန်တော် စသိတာ သီချင်းကြေငြာတစ်ခုမှာပါ.. အဲဒီကတည်းက မမ တစ်နေ့ အနုပညာ လောကမှာအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါ.. မမက အောင်မြင်မယ့်အောင်မြင်တော့လည်း ချက်ချင်းကြီးပါလား.. မမကတော့ဘယ်လောက်ကြိုးစားလိုက်ရလဲ မသိဘူး..ကျွန်တော်ကတော့ မြန်ဆန်လွန်းတယ်လို့ထင်တာပဲ..နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မကြည့််ဖြစ်တာလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်.. မမကိုအမြဲအားပေးနေမှာပါ.. တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ မမ နဲ့ အပြင်မှာ တစ်ခါလောက်တွေ့ဖူး ပြီးစကားပြောကြည့်ချင်ပါတယ်.. မမ ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ… မောင်လေး…
April 10, 2009	မ
မရဲ့စကားသံလေးက ပရိတ်သတ်ကိုတော်တော်ဆွဲဆောင်ထားတာပဲ..ကျွန်တော်လည်းအဲဒီစကားသံလေးနဲ့ပဲ မမရဲ့ကားတွေကိုကြည့်ဖြစ်သွား တာပါ..ကျွန်တော် မ ကိုသဘောကျသွားတာက ကိုကိုဘာလို့မုန်းတာလဲ ဇာတ်ကားပါ..
April 15, 2009	how are you?
May 23, 2009	ညီမလေးရေ…နေကောင်းတယ်နော်…မရောက်ဖြစ်တာလည်းကြာသွားပြီးလေ..အလုပ်တွေများနေလို့ပါ..ညီမလေးတစ်ယောက်ရောအလုပ်တွေများနေလား…ကိုတို့ထက်စာရင်များမှာပေါ့..ပြည်သူတွက်…ပြည်သူချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုးစားနေရတာဆိုတော့…အလုပ်များမှာသေချာတယ်ဗျာ..ပင်ပန်းနေလောက်ရောပေါ့……ပင်ပန်းမှုတွေဘယ်လောက်များများ..အောင်မြင်မှုတွက်ဆက်လက်ရှင်သန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်…ကံကောင်းခြင်းတွေ ညီမလေးရရှိခံစားနိုင်ပါစေ….
June 16, 2009	အရမ်းချစ်တယ်….သက်မွန်…အမျာကြီးအောင်မြင်ပါစေ…..
June 29, 2009	သက်မွန်ရယ် မင်းကိုအစကတည်က တွေလိုက်မိကတည်က အရမ်းကိုချစ်မိသွားတယ် မင်းမအောင်မြင်ပါစေနဲ့လို ကိုယ်ဆုတောင်လိုက်မိတယ် ဒါပေမယ်မင်း အရမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ် အစကထဲကစိတ်ထဲမှာ ထင်လိုက်မိသာဘဲ အဲလိုအောင်မြင်လာတော့ ယင်ကောင်းတွေလို ဝိုင်းအုံလာတဲ့ ကောင်တွေကို သူတို့ဖင်ကို ပိတ်ပြီးကန်လိုက်ချင်တယ် စကားပြောမှားရင်ခွင့်လွှတ်နော် ကိုယ်ရင်ထဲက စကားကို ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်ပါမယ် ဆုံနိုင်ခွင်မရှိတဲ့ ကိုယ်တို့ဘဝကို ဖြင့်နိုင်ရင် နောက်ဘဝကျရင် ဆုံချင်တယ် မင်းအမြဲတမ်း ရေလိုအေးပြီး ပန်းလိုမွှေးပြီး အမြဲတမ်းအောင်မြင်ပါစေ
July 15, 2009	မမသက်မွန်မြင့်ဒီထက်အောင်မြန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အမ။
မမသက်မွန်မြင့်လူကောင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်လိုက်ပါတယ်။
Alway How are you?
I’m remember mama .
thankyou very much.you’re so nice.
Saw Lar Moo Say
August 6, 2009	ဟိုင်း၊ သက်မွန်မြင့် ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်၊ တို့နဲ့သူငယ်ချင်းအဖြစ် စကားပြောဖို့အချိန်ရနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွှန်တော့်ရဲ့အီးမေးနဲ့ စက်သွယ်နိုင်တယ်နော်။ တို့ကတော့ခင်တတ်သလို နောက်တတ်တယ် ခင်မင်ရင်းနီးလို့လဲလွယ်တယ်။ အခုနင်ကဘယ်မှာနေတာလဲ တော့မသိဘူး သိလို့ရမယ်လား။ စက်သွယ်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ အခြေအနေအရ တွေ့ဆုံစကားပြောရမယ်လို့လဲမျှော်လင့်တယ်။ Have fun as your smile face , talk to you later bye……….
s myo lwin
October 16, 2009	ကြိုးစာဖို့ပဲပြောလိုပ်ချင်ပါတယ်
April 19, 2010	မသက်မွန်မြင့်ရေး ဇာက်ကားတွေ ကြည့်ရတာတော့ မိုက်တယ်ဗျာ over မဖြစ်တာကို ပိုသဘောကျတယ်..ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းတာပေါ့ဗျာ…. ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားလေး မျက်စေ့တဖက်လည်း မမှိတ်တက်ပဲနဲ့ စွတ်စွတ် မှိတ်ပြမနေနဲ့..အဲလိုအပြောမခံချင်လည်း မှိတ်တက်အောင် မှန်ထဲ ကြည့်ပြီး ကျင့်ထားအုံး..ကျန်တာတွေက ကျနော်တစ်ယေက်တည်းတင်မဟုတ်ပါဘူး လူတော်တော်များများကြီးကို ခင်ဗျားလေးကို ကြိုက်ကြတယ်…ကျုပ်လည်းကြိုက်တယ်….. love of venus ထဲမှာ ခင်ဗျားလေး မတင်စိန်လုပ်တာ ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှသလို သရုပ်ဆောင်တာလေးလဲပီးတယ်နော ဘာတဲ့ –မတင်စိတ်က ချစ်ပဲ ချစ်တက်တာတဲ့ ကျန်တာတွေမသိဘူး…မတင်စိန် ကြာကူလီ အခန်းမှာလေ….အားပေးတယ် လေးစားတယ်ဗျာ….. ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပျော်ရွင်စွာပေါင်းရပါစေဗျာ….
April 19, 2010	***အချစ်အိမ်ကလေး***ဇတ်ကားထဲမှာ လောက် ခင်ဗျားလေးကို သနားတာ မရှိဘူးဗျာ…..free style လည်းကျတယ် ကျုပ်တောင် ငိုမိတော့မလို့ ဖြစ်ရတယ်.. ဗြဲ….မသက်မွန်မြင့် ဘုရားတရားလေးလည်းတော်တော်လုပ်တယ်ကြားတယ် မျက်နှာ ကြည့်ရတာ တော်တော် အေးချမ်းတယ်….ကျုပ်တို့ ရေဦးလည်း လာလည်လေဗျာ ဇာတ်ကားလေးဘာလေးရိုက်ပေါ့ဗျ…မသက်မွန်မြင့် ဝမ်းကွဲညီမ မိုးမိုးကတော့ ရေဦးကုန်းလို့တော့ ကြားတယ်..သူလည်းတခါတလေ အွန်လိုင်းတက်လာတက်တယ်..စကားကတော့ မပြောဘူး ကျုပ်လည်းမာနကြီးတယ် သူလည်းမာန်နကြီးတယ်..(အမှန်က သူကမပြောတာလေ )..ဗြဲ…
June 23, 2010	sister try.I hope you well.
November 8, 2010	သက်မွန်မြင့်က အရမ်းသရုပ်ဆောင်ကောင်းနေပြီနော်..။ ချစ်စရာလဲ ကောင်းတယ်..။
ဒီထက်လဲ ပိုလို့ အောင်မြင်နိုင်ပါစေ..။ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်..။ သက်မွန်မြင့်က ကျနော့်အတွက်
အကြိုက်ဆုံး၊ စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ..။
December 20, 2010	မကိုအရမ်းချစ်တယ် လူမှန်းသိတတ်စကတည်းကစွဲလမ်းခဲ့တာ ဖြူစင်တဲ့အပြုံး အပြစ်ကင်းတဲ့အသံအားလုံးဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ မြတ်နိူးခြင်းမိုးတိမ်တွေပါပဲဒီဘဝမှာ ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ အချိန်တိုင်းစဉ်းစားမိတယ်
April 7, 2011	သူကိုအရမ်းကြိုက်တယ်
June 22, 2011	မသက်ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်
July 26, 2011	မင်းကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုမင်းချစ်မလား။မင်းလက်ထက်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းအဖွားကြီင်္းဖြစ်တဲ့ အထိငါစောင့်နိုင်တယ်ဆံဖြူပြီးသွားကိ်ျုးနေပါစေငါအတွက်တော့ နုပျိုဆဲပါပဲငါကမင်းသားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးတောင်ပနေတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်လဲမဟုတ်ပါဘူးငါ့မှာကိုယ်ပိုင်ကားတောက်မရှိပါဘူးဆင်းရဲတာတောင်ဖွတ်တောင်ငါ့ကိုအဖေခေါ်လောက်တယ်မင်းငြင်းမယ်ဆိုရင်တောင်ငြင်းလောက်ပါတယ်ငါရဲ့ ဘ၀ကငရဲပြည်ထက်တောင်ပူပြင်းလှပါတယ်မင်းကိုအပျင်းပြေခေါ်သွားဖို တေဆေ့တောင်ဆန
July 26, 2011	ငရဲပြည်ခေါ်သွားဖို့ တောင်ဆန္တမရှ်ိပါဘူးအေးမြတဲ့ နတ်ပြည်ဆိုရင်မင်းလိုက်နိုင်မှာပါဒါပေမဲ့ မင်းငယ်သေးတော့မခေါ်ချင်ဘူးတစ်ကယ်လို့ များမင်းအပြုံးလေများမရှိရင်ပန်းတွေကဘယ်ပွင့်နိုင်တော့မှာလဲအိမ်မက်ထဲမှာရောင်ရောင်ပြီးခေါ်နေတာလျှာတွေလဲတိုနေပါပြီထွက်သမျှအခွေတိ်ုင်းလိုက်ကြည့်ရတာလဲလစာတစ်ပြားမှမကျန်တော့ပါဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့ တစ်သက်တာထာဝရတွေ့ ချင်တယ်အချိန်ပေါင်းတွေများစွာမင်းအခွေများစွာငှားကြည့်နေရလို့ တီဗီထဲကမင်းသမီးလေးရယ်
July 26, 2011	အများနဲ့ ပြိုင်ပြီးရောပြီအချိ်န်တိုင်းအလှထိပ်ခေါင်မင်းသမီးလေးရယ်မင်းအနားမှာပဲဝဲရစ်လို့ နေမဲ့ ဘ၀ပါကိုယ်ဘ၀နုံခြာမပြည့်ဝပေမဲ့ နှသားရေးရာနဲ့ ပက်သက်ရင်တော့အများနဲ့ ယှဉ်ရဲတယ်ရှိပါစေတော့လေမင်းဘ၀သာယာဆိုပြေချမ်းမြေ့ ပါစေ ။
မင်းကမင်းသမီး+ ငါကသူတောင်းစား= ?
September 2, 2011	အရမ်းလှတာပဲနော်ဓါတ်ပုံတွေမြင်မြင်ချင်းစိတ်အေးချမ်းလိုက်တာနော်……..
December 17, 2011	မမသက်မွန်မြင့်ကို ကျွန်တော်အမြဲတမ်း အားပေးနေပါတယ် မမ က အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲ မမ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်း အရမ်းလို့ကောင်းတာပဲ မမ အကယ်ဒမီရမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် မမ ဆက်ကြိုးစားပါ ကျန်းမာရေးကိုလဲ ဂရုစိုက်ပါ ထာဝရအားပေးနေမယ့် ကျော်ဇေယျ
December 17, 2011	မမ သက်မွန်မြင့်ကို ကျွန်အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ် မမ က အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲ မမ သရုပ်ဆောင်တဲ့ဇာတ်ကားတိုင်း အရမ်းကို ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲ မမ အကယ်ဒမီရမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် မမ ကျန်းမာရေးကိုလဲ ဂရုစိုက်ပါ။ ထာဝရအားပေးနေမယ့် ကျော်ဇေယျ မမ သီချင်းဆိုပါလား ဆိုဖြစ်အောင်ဆိုပါ တစ်ခုတည်းပဲ တောင်းဆိုတာပါ။
February 17, 2012	ဒီနှစ်မှာသက်မွန် အကယ်ဒမီရသွားတာတော်တော်ကြီးကိုဝမ်းသာမိပါတယ် ဆက်လက်ကြိုးစားပါ အားပေးပါတယ် စတန့်တော့မထွင်ပါနဲ့နော်
February 20, 2012	ကြိုးစားနေပါနော်..အားပေးနေပါတယ်
March 24, 2012	မမ ကို ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ချစ်ချင်တယ် နော် ရမလားမသိဘူး။
April 12, 2012	လိုးချင်တာပဲသိတယ်.သက်မွန်မြင်.ရယ်။
April 12, 2012	သက်မွန်ရေဆုံးမစကားလေးပြောာချင်တယ်အိမ်ထောင်မပြုနဲ့အုန်းကြိုးစားအုန်းးနော်ဘဝမှာပြည့်ဆုံပြီဆိုမှစဉ်းစားနော်
May 20, 2012	မမသက်ကအရမ်းချေားတယ်နော်
May 20, 2012	မမကလေ
June 11, 2012	မသက်မွန်မြင့်
June 11, 2012	အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်
July 20, 2012	ချစ်ဆရာလေးဗျာ တကယ်ပြောတာပါ ရိုးရိုးတွေးနော် 🙂
July 29, 2012	hello nyimalay
August 3, 2012	မမသက်မွန်ကိုအရမ်းချစ်တယ်အမတစ်ယောက်လို…. လှတောသားကွ
August 22, 2012	မသက်ကြီးကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါမသက်ကြီးရဲ့မင်းသမီးဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားခဲ့ပုံကိုလေးစားပါတယ်
September 2, 2012	ချစ်ဖို့တော့ကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နင့်ကိုငါမကြိုက်ဘူး။နင့်ကားတွေလဲငါမကြည့်ဘူး။
September 23, 2012	မမက်ုအရမ်းချစ်တယ်သိလား မမပါတဲ့ကားတွေဆိုအားလုံးကြည့်တယ်သိလား
October 14, 2012	သက်မွန်ရေ အခုလိုပဲနေသွားနော် အောင်မြင်မှူကို ရိုးသားခြင်းနဲ့ရယူပါ အစဉ်အားပေးလျက်…
October 20, 2012	မမသက်မွန်မြင့်ကိုစပေါ်ကတည်းကကြိုက်ခဲ့တာပါ။မမရဲ့အလှကအေးမြတယ်
October 28, 2012	မသက်မွန်ဒီထက်မကအောင်မြင်မှူတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတေင်းပေးပါတယ်…
December 30, 2012	မ သက်မွန်မြင့်ရေဆုမရလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ဝမ်းနည်းပါတယ်
December 30, 2012	မမကချစ်ဖို့ ကောင်းလို က်တာ
December 30, 2012	မမကို စတွေ့ ကတည်က ချစ်တာပါ အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်
December 30, 2012	မမညီမလေးစိတ်မကောင်းပါဘူး အကယ်ဒမီပေးပွဲကြည့် ပြီးတော့ ထမင်းတောင်စားမ၀င်တော့ဘူးအမ
အမကြီုးစားပါနော် အမကိုညီမ အမြဲတမ်း အများကြီးအားပေးနေပါတယ်
January 2, 2013	သက်မွန်ရေ ဘာတွေလုပ်လုပ်အဆင်ပါစေ အောင်မြင်ပါစေလို့ အကိုဆုတောင်းတယ်နော်
April 15, 2013	ပြီးပြည့်စုံသောဘ၀လေးရပါစေ
May 12, 2013	သက်မွန်လှတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ.အရမ်းကြီးခေတ်မဆန်စေချင်ဘူးစိတ်တော.မဆိုးပါနဲ.ကျွန်တော်ကသက်မွန်ရဲ.ပရိတ်သတ်တစ်ဦးမို.အကြံပေးတာပါ
nan ko ko
May 12, 2013	သက်မွန်နဲ.အပြင်မှာတွေ.ချင်မိတာကျွန်တော.ရဲ.အိပ်မက်ပါ
May 13, 2013	အနုပညာဆိုတာနက်ရှိုင်းလွန်းတယ်ခက်ခဲလွန်းတယ်ဒါတွေကိုပိုင်နိုင်တဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို.ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးသက်မွန်ရဲ.ကြိုးစားအားထုတ်မှု.ကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဆက်ကြိုးစားပါအနုပညာလောကမှာကောလဟာလဆိုတာမကင်းပေမဲ.အတတ်နုင်ဆုံးကိုယ်.ဘက်ကမမှားအောင်နေဖို.အကြံပေးချင်ပါတယ်
May 27, 2013	ဒီ.ထက်မကအောင်မြင်မှု.တွေရဖို.ဆိုတာသက်မွရဲ.ရင်ထဲမှာခွန်အားတွေရှိမှဖြစ်မှာမဟုတ်လား
August 19, 2013	ဆက်ကြိုးစားပါ
Kant Kaw Htet
September 5, 2013	မသက်မွန်မြင့်ကို အမြဲအားပေးနေမယ်
September 20, 2013	အောင်ဆန်းမင်းကလည်း အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်။
October 11, 2013	ဖုန်းပြောခွင့်ရနိုင် ရင် ph No. သိချင် ပါတယ်
January 4, 2014	hi သက်မွန် သက်မွန်အနုပညာလောကထဲမှာစပေါ်လာထဲက အားပေးခဲ့တာပါ ။သက်မွန်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်ရကြားရတိုင်း ကိုယ့်ညီကိုမောင်နှမ သားချင်းတယောက်အောင်မြင်နေသလိုကို အရမ်းပျော်ပြီးကြည်နူးမိပါတယ်။သက်မွန်ခုနေတာ မြယမုံမှာဝယ်ထားတဲ့အိမ်အသစ်မှာနေတာလား။ဖြစ်နိုင်ရင် သက်မွန်နဲ့ သီးသန့်chatချင်ပါတယ် ။သက်မွန်ထာဝရအောင်မြင်ပါစေ။
that monn soe
May 9, 2014	diufieuewurio4jerkuuiodf8eroie4juio7dfjuiodf7diofjdifodsjfsdfu
November 28, 2014	Aww haealike tar Barsarbarlay matitebu,!
December 2, 2014	hello imbarlook naybarlay thadidyabarda,.!
December 4, 2014	Aww Atoelayko Thafoknowmaypoe’,.!
December 10, 2014	ILOVEYOU;MAMA
December 12, 2014	0947054682′
January 8, 2015	အင်း အိုးလေးကွဲသွားပြီ အခုတော့
January 29, 2015	Aww Mima The Chan So Ayin Knowbarta Rakhaing Tinyin Thar Naykha Sodar Youkgar Ayin Chitta Notlayaye Losobarlar Youkgar Kyanayma,..
May 24, 2015	ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါ နားညီးအောင် ချစ်ဦး အင်း သူကမိမဆိုတော့ ချစ်တော့မယ်ဆို သူက ငါ့ကို ညည ကျရင်ဘာလုပ်အသိဘူး အဟီ မရယ်ရဘူး တကယ်ပြောတာ. ။
May 25, 2015	hi hello nyinyi minkhalarbar,..
August 17, 2015	hi hello nay know barlar ha,..